तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गर्दा कुन कुन देश धेरै खुशी छ ? - Himali Patrika
तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गर्दा कुन कुन देश धेरै खुशी छ ?
हिमाली पत्रिका ३२ साउन २०७८, 7:41 pm
एजेन्सी, ३२ साउन । अफगानिस्तान तालिवानको क’ब्जामा गएको छ । अमेरिकी सैनिक र विदेशी नागरिकहरु अफगानिस्तान छाडिरहेको दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले देखाइरहेका छन् । अमेरिकी वायुसेनाको विमानले काबुल विमानस्थल छाड्दा हजारौं अफगानीले घेरेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
तालिवानले ब’न्दुकको बलमा शासनसत्ता क’ब्जामा लिएपछि विश्वका शक्तिशाली देशहरुबाट फरक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । बेलायतले यो घटनालाई ‘विश्वकै असफलता’ भनेको छ । बेलायतका रक्षामन्त्ती बेन वालेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असफल भएको भनेका छन् ।
अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति जोय वाइडेन असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले वाइडेनको राजीनामा मागेका छन् । अमेरिकालाई यो घटनाले ठूलो धक्का दिएको छ । अमेरिका महाशक्ति अब नरहेको सम्म भन्न थालिएको छ ।
तालिवान अफगानिस्तानमा नि’य’न्त्रण कायम गर्न सफल भएपछि चीन खुशी देखिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको धारणा बाहिर ल्याउने ग्लोबल टाइम्सले अमेरिका असफल भएको तर्क गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनइङले चीन अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन तयार भएको बताएकी छिन् । उनले चीनले अफगान जनताको अधिकारको सम्मान गर्ने समेत बताइन् ।
तालिवान शक्तिमा आएपछि पाकिस्तान पनि खुशी भएको छ । तालिवानलाई विगतमा पनि पाकिस्तानले साथ दिदै आएको थियो । अहिले फेरि उसैको साथ पाएर अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्न सफल भएको चर्चा छ । १५ अगष्टमा तालिवानले काबुल कब्जा गरेकै दिन तालिवान नेतासहितको टोली इस्लामावाद पुगे । उनीहरुले आज पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मेहमुद कुरेसीसँग भेटवार्ता गरे ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानले निरन्तर अस्थिरता थेग्न नसक्ने विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दीगे शान्ति र स्थिरतामा निरन्तर साथ दिनुपर्ने भनेको छ ।
तालिवानले काबुल कब्जा गरेपछि भारतको आधिकारिक भनाई आएको छैन । तालिवानहरु जहिले पनि भारतविरोधी देखिएका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । भारतले अफगानिस्तानको पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ । यसकारण पनि भारत गम्भीर हुने अवस्था छ ।
इरानले अफगानिस्तानको विकसित घटनालाई अमेरिकाको पराजय भनेको छ । इरान यो घटनाबाट खुशी देखिएको छ । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रैसीले अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय मेलमिलापमा जोड दिएका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकाको सैन्य असफलताले सुरक्षा, शान्ति र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कने अवसर प्रदान गरेको बताएका छन् ।
तालिवानले सत्ता क’ब्जा गरेपछि रुस पनि खुशी देखिएको छ । उसले खुलेरै त्यसबारे बोलेको छैन । रुसी राजदूत डिमिट्री झिरनोभले मंगलबार तालिवानी नेतासँग भेट्ने तय भएको समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ ।
रुसले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गर्नुभन्दा तीन हप्ता अघि तालिवानी नेताहरुले मस्को पुगी कुराकानी गरेका थिए । उनीहरुले रुसको साथ र भविष्यमा मिलेर जानेबारे छलफल गरेका थिए ।
सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघको फौजविरुद्ध तालिवानले यु’द्ध गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरुले अमेरिकाबाट साथ पाएका थिए । अहिले अमेरिकी सैनिकविरुद्ध यु’द्ध गर्न रुस र चीनले साथ दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।